အားကစားသတင်း Archives - MM Live News
ဝိတျတနျး မတူပမေယျ့ စိတျပူစရာ မရှိပါဘူး ယှဉျပွိုငျဖို့ မစောငျ့နိုငျတော့ဘူးဆိုတဲ့ အောငျလအနျဆနျ ကမ်ဘာမှာ မွနျမာဟလေို့ ဂုဏျယူဝံ့ကွှားစှာ စှမျးဆောငျနိုငျသော မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ နှဈထပျကှမျးခနျြပီယံကွီး အောငျလအနျဆိုငျးကတော့ဂပြနျနိုငျငံမှာ ထိုးသတျရမယျ့ ပှဲစဉျအတှကျ မစောငျ့နိုငျအောငျ ဖွဈနပေါပွီတဲ့နျော ….. အာရှ ရဲ့ အကွီးမားဆုံး နဲ့ အခမျးနားဆုံး ဖိုကျတာ ပွိုငျပှဲကွီး ဖွဈတဲ့ One Century ပှဲစဉျကို လာမယျ့အောကျတိုဘာလ 13 ရကျနမှေ့ာ၊ ဂပြနျ နိုငျငံ တိုကြို မွို့မှာ ကငျြးပ ပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈကွောငျး One Champions hip က တရားဝငျ ကွငွောလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပွိုငျပှဲမှာ One Championship ရဲ့ အတျောဆုံး ဖိုကျတာတှေ ယှဉျပွိုငျ ကစားမယျ့ […]
May 19, 2019 MM Live News
အောင် လ အန် ဆန်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မြန်မာဂုဏ်ဆောင် MMA Fighter တယောက် ဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ အမြဲတမ်းလိုလို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ပွဲစဉ်တွေကို ထိုးသတ်ရလေ့ရှိပြီး အမြဲတမ်းလိုလိုလည်း တဖက်ပြိုင်ဖက်ကောင်းကို အနိုင်ယူ ထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင်နေတဲ့ သူတယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ လို မျိုး မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ပြီး ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလောက်တဲ့ အရာတွေကို အမြဲပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ ပရိသတ်ဝန်းရံမှုကိုလည်း အခိုင်အမာ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လတုန်းက နာမည်ကြီး ဖိုက်တာ တယောက်ဖြစ်တဲ့ ကန် နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ သွားရောက်ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာတော့အောင်လအန်ဆန်ကိုတော့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား Heavy Weight Champion တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘရန်ဒန်ဗီရာ က […]
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလေးစားအားကျနေရတဲ့ မြန်မာ့ကိုယ်စားပြု One Championship (MMA) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကို အားလုံးလည်း လေးစားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပွဲကောင်းများစွာကို ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လက်ဝှေ့သမားများစွာရဲ့ လေးစားမှုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းကတော့ လက်ရှိမိသားစုကို အချိန်ပေးအနားယူနေပြီး မကြာမီယှဉ်ပြိုင်မည့် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအတွက်လည်း ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အသိမှတ်ပြု One Championship (MMA) ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်းကတော့ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို မကြာခဏပြသလေ့ရှိပြီး ဘဝကို လက်ဝှေ့လောကထဲကနေပြီး ရိုးရိုးသားသားဖြတ်သန်းနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက အောင်လအန်ဆန်းကတော့သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ခက်မိုက်မိုက် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေထဲမှာ အနောက်တိုင်းစတိုင်ခက်မိုက်မိုက်ပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ လေ့ကျင့်ရေးဝတ်စုံအမိုက်စားနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ PHOTOS […]
ကမ္ဘာ့ MMA ဆုတွေအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ပါဝင်နေပါပြီ…
World MMA Awardsဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် မစ်ဒယ်ဝိတ်နှင့် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ပါဝင် ရန်ကုန် ဧပြီ ၂၇ ဘက်စုံကိုယ်ခံပညာသုံး MMA ကစား သမားများအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမား သည့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲဖြစ်သော Fighter Only မဂ္ဂဇင်းက ချီးမြှင့်သည့် (၁၁) ကြိမ်မြောက် World MMA Awards ဆုစာရင်းတွင် မြန်မာနာမည်ကြီး ကစားသမား အောင်လအန်ဆန်က ဆုနှစ်ခု၏ ဆန်ခါတင်စာရင်း၌ ပါဝင်လျက် ရှိသည်။ အောင်လအန်ဆန်သည် ယင်းဆု ပေးပွဲအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် အကောင်းဆုံးဆု ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးအားကစား ဆုနှင့်တစ်နှစ်တာ နိုင်ငံတကာအကောင်း ဆုံး အားကစားသမား ဆုစာရင်း၌ ပါဝင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ Fighter Only မဂ္ဂဇင်းသည် ယင်းဆုများကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ […]
ကချင်ပြည် စစ်ရှောင်စခန်း က အမွှာကချင် မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးက နိုင်ငံတကာ ကာရတေး ချန်ပီယံဆုကို ရယူသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်…
ဒီနေ့(ဧပြီ ၂၁ ၂၀၁၉)ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ကာရာတေး ပြိုင်ပွဲမှာ ကချင်ပြည် စစ်ရှောင်စခန်း က အမွှာကချင် မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးက(ဆန်မိုင်နူးနဲ့ ဆိုင်လတ်အောင်) အဆင့်ငါးဆင့်စလုံးမှာ ပြိုင်ဖက်ကို အပြတ်အသတ် အနိုင်ရယူပြီး နိုင်ငံတကာ ကာရတေး ချန်ပီယံဆု ကို သိမ်းပိုက် ရယူလိုက်ပါ…. တယ်..မြနိမာနိုင်ငံသား အပေါင်းတို့ ဂုဏ်ယူနိုင်ကြပါစေဗျာ.. ထပ်တိုးအနေနဲ့ “ဂျာလ ” ဆိုတဲ့ ကချင်ချာတိတ် ကစားသမားကလည်း ချန်ပီယံဆု ထပ်မံရရှိလိုက်ပါပြီ…. ဒီပြိုင်ပွဲဟာ နိုင်ငံတကာက ကာရာတေး သမား အယောက် (၁၀၀၀) ကျော်လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး သူတင်ကိုယ်တင် အပြတ်တီးကြတဲ့ ပွဲကြမ်းတစ်ပွဲပါ…..။ crd~ပက်ထရစ် / ဧပြီ ၂၁ ၂၀၁၉. UNICODE […]
စိန်ခေါ်သူ ဗီရာနဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို ဖိလစ်ပိုင် ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှာ ထိုးသတ်ချင်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အောင်လန်အန်ဆန်…
အောင်လန် အန်ဆန်း နဲ့ ဖီလစ်ပိုင် ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို အောက်တိုဘာလ 13 ရက် နေ့မှာ ၊ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ဖို့ စီစဉ် ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီပွဲကို အောင်လ အန်ဆန်း က ဟာဆီဂါဝါ ကို အနိုင်ယူတဲ့ ပွဲစဉ် အပြီး ၊ ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှောက်မှာ အတည်ပြု ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဗီရာဟာ အောင်လ အန်ဆန်းရဲ့ Light Heavyweight Champion ဆု ကို စိန်ခေါ် ခဲ့ရာ ကနေ ၊ အောင်လ က လက်ခံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ကတော့ […]
ဇနီးဖြစ်သူက သူ့ကို စတင် ချဉ်းကပ်ခဲ့တာလို့ သူ့အချစ်ရေးကိုဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ အောင်လ အန်ဆန်
မြန်မာတို့ရဲ့ အသည်းစွဲကျော် သူရဲကောင်းကြီး အောင်လအန်ဆန်း ကြိုးဝိုင်းထဲမှာပဲ အောင်ပွဲတွေ အလီလီ ရနေတာမဟုတ်ပါဘူး ၊ အချစ်ရေးမှာလဲ ဇနီးဖြစ်သူက သူ့ကို စတင်ချဉ်ကပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထူးခြားတာက အောင်လအန်ဆန်း အတွက် ဘ၀ အလှည့်အပြောင်းလို့ ဆိုလို့ရမယ့် အရာတိုင်းဟာ MMA ကစားနည်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးပဲ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ MMA ကစားနည်း နဲ့ပဲ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆု2ခု ကို လက်ဝယ် သိမ်းပိုက် ထားနိုင်ခဲ့သလို ၊ ဇနီးဖြစ်သူ ကေသီ ကိုလဲ MMA လေ့ကျင့်ရေး စင်တာမှာပဲ တွေ့ဆုံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်လ ကိုယ်တိုင်က MMA ကစားနည်းဟာ သူ့ဘ၀ အတွက် ဘယ်လောက် အထိ အရေးပါနေလဲ […]
မင်းနဲ့ငါ ဆူရှီစားဖို့ အကြွေးကျန်နေသေးတယ်၊ အမြန်ဆုံး ပြန်ကောင်းလာပေးပါ။”
April 2, 2019 April 2, 2019 MM Live News
[Zawgyi Version] ပြိုင်ပွဲမစခင်က ပြိုင်ပွဲပြီးရင် ဆူရှီစားဖို့ ချိန်းထားတယ်လို့ အောင်လက ပြောထားပြီး အခုလို ဆေးရုံတက် ကုသနေရလို့ ဆူရှီစားဖို့ အကြွေးကျန်သေးတယ်လို့ အမြန်ဆုံး ပြန်ကောင်းလာပေးဖို့ အောင်လက ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ MMA One Championship ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်လ အန်ဆန်ရဲ့ ခြေကျန်ချက်ကြောင့် ဂျပန်ဖိုက်တာ ကမ်တစ်ယောက် နံရိုးကျိုး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ကမ်ရဲ့ လူမှု ကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ အောင်လအနေနဲ့ကမ်ကို မစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ် ကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအချီမှာပဲ ညာလက်သီးနဲ့ အတူ ဒိုင်ပွဲရပ် အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ပွဲချိန်အတွင်း ခြေကျန်ချက်က ကမ်ကို အထိနာစေခဲ့တာ […]